Gare Routière « Maki » : Tobim-piantsonana goavana indrindra aty Afrika -
AccueilRaharaham-pirenenaGare Routière « Maki » : Tobim-piantsonana goavana indrindra aty Afrika
16/12/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Tanteraka ny fanamby. Notokanan’ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina omaly, ny tobim-piantsoNan’ny taksiborosy nampitondraina ny anarana “Maki”, eny Andohatapenaka. Tobim-piantsonan’ny taksiborosy misahana ireo zotra rezionaly sy nasionaly? izay tafiditra indrindra tao anatin’ny tetikasan’ny Filoham-pirenena.
Raha ny mikasika ity tobim-piantsonan’ny taksiborosy “Maki” ity, dia tao anatin’ny sivy volana no nanatanterahana ny asa, ka ny minisitera eo anivon’ny Prezidansa misahana ny Tetikasan’ny Filoham-pirenena sy ny Fanajariana ny Tany, ary ny Fampitaovana (M2PATE) no nanatanteraka ny fananganana io fotodrafitrasa io. Nambaran’ny minisitry ny M2PATE, Benjamina Ramanantsoa, ary tamin’ny lahateny nataony fa tobim-piantsonana goavana indrindra aty Afrika ny Gare Routière “Maki” eny Andohatapenaka. Manana velaran-tany hatramin’ny 4 Ha mantsy izany fotodrafitrasa vao notokanana izany.
Voalaza ihany koa fa tobim-piantsonana moderina sy manara-penitra io eny Andohatapenaka io. Mahatratra 2 770 m2 ny ivon’ity toerana natokana ho an’ny fiara mpitatitr’olona ity, izay ahitana trano lehibe natokana ho an’ny kaoperativa miisa 80. Ahitana efitrano miisa valo, sy birao miisa 10, efitrano fivoriana lehibe iray, ary ahitana fisakafoanana sy efitrano fidiovana sy fivoahana manara-penitra. Ahitana fiantsoana fanalana sy fampidirana olona miisa 32, ary seza miisa 156 ihany koa ao amin’izany, sns.
Ankoatra izay, ny fitaterana amin’ireo Lalam-pirenena Voalohany (RN1) sy fahefatra (RN4) ary fahenina (RN6) no mampiasa ity tobim-piantsoanana “Maki” ity.
Marihina fa niara-dalana tamin’izany ihany koa ny fitokanana ny tobin-tsolikan’ny orinasa Total miisa roa, izay manana velaran-tany 7 550 m2. Tobin-tsolika voalohany manara-penitra sy raitra eto Madagasikara, satria ahitana “borne électrique” ahafahan’ireo manana sy mampiasa fiara “hybride” mamahana herinaratra ny fiarany. Mandeha amin’ny herin’ny masoandro ihany koa izany noho ny fampiasana ny angovo azo havaozina, sns.
Etsy andaniny, hosahanin’ny minisiteran’ny Fitaterana sy ny Famantarana ny Toetr’andro (MTM) kosa ny fitantanana io tobim-piantsoanana “Maki” io manomboka izao, taorian’ny fitokanana azy tamin’ny fomba ôfisialy omaly.
Nambaran’ny minisitry ny MTM, Beboarimisa Ralava, fa mbola tsy miasa avy hatrany ity tobim-piantsonana “Maki” ity. “Mbola misy eo amin’ny telo volana eo ho eo ny fandaminana atao rehetra amin’ireo kaoperativa mpitatitra vao afaka miasa ity fotodrafitrasa goavana avy amin’ny Filoham-pirenena ity. Izany hoe, miandry ny fandaminana rehetra vao mifindra eto Andohatapenaka ny fitaterana amin’ireo amin’ny RN1 sy RN4 ary RN6. “, hoy ny minisitry ny Fitaterana, Beboarimisa Ralava.
Ankoatra izay, ny minisiteran’ny Fitaterana ihany koa no tompon’andraikitra amin’ny fametrahana “appel à manifestation d’intérêt” amin’izay hitantana sy hiandraikitra io fotodrafitrasa io. Nambaran’ny minisitra mpiahy ny fitaterana ihany koa fa tafiditra amin’ny fandaminana ihany koa ny mahakasika ny fiarovana io tobim-piantsonana vaovao io. “Manao antso avo amin’ny rehetra aho mba tokony hajaina ny fananana iombonana, mba haharitra sy ho lovain’ny taranaka mandimby”, hoy ny minisitra Beboarimisa Ralava.